Twitter ndeYangu Nyowani Yekutsvaga Injini | Martech Zone
Twitter ndiyo Yangu Nyowani Yekutsvaga Injini
Mugovera, March 15, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndiri kutevera izvozvi 341 vanhu pa Twitter. Ndakaonana neTwitter ndikavabvunza kuti vagone 'auto-kutevera'. Izvi zvinoreva kuti kana iwe uchinditevera, ini ndinobva ndakutevera. Haisi yakanyorwa ficha kana iri mushandisi interface ... asi mumwe munhu akandiudza nezvazvo, saka ndakaikumbira uye Twitter nenyasha ndakaigonesa.
Pane zvakawanda zvekukurukurirana kunze kwewebhu nezve Twitter uye izvo zvinogona kana anogona kwete be a dongo of nguva.
Sezvo maturusi matsva ekutaurirana uye matekinoroji achionekwa kuburikidza newebhu pane kazhinji shanduko mukushandisa kwavo izvo, pamwe, zvaisatarisirwa nevagadziri vayo. Nhasi chete ndipo pandakaziva mashandisiro andinoita Twitter seSejini Yekutsvaga, uye mashandisiro andinoita seNjini yekutsvaga nevamwe. Zvinotaridza kwandiri kuti Twitter inogona kupedzisira yatora chidimbu chakati kubva kune humwe hunyanzvi - pamwe muenzaniso wedunhu iri ChaCha, iyo yekutsvaga-inotsvaga injini yekutsvaga.
ChaCha haana kugara achigamuchira ari zvakanaka dzvanya - uye zvechokwadi handina kumbonzwisisa kuti bhizinesi raive rei. Vanhu vanotsigira kutsva zvinoita kunge zvisina basa. Uye pamwe iri… kana iwe uri kambani uye kwete nharaunda.
Izvo zvakati, mukana we Twitter seinjini yekutsvaga inoshamisa. Ndakakomberedzwa nenyanzvi dzebhizinesi, shamwari uye vandinoshanda navo vandinofarira kugovana navo nekudzidza kubva. Ndinovaremekedza vakazvimiririra, havazi vatorwa kune rumwe rutivi rwewebhu. Uye sezvo huwandu hwevanhu vandakatanga kutevera hwave hukuru - ndizvo zvakaitawo huwandu uye huwandu hwemhinduro dzandakagamuchira pandakatumira mubvunzo.
Pandakabvunza nezve online online mupepeti, vanhu vaviri vakabva vapindura na Aviary. Pandakabvunza a Slideshare imwe nzira (vanga vari pasi zvakanyanya nguva pfupi yadarika), ini ndakagamuchira isingasviki gumi nemhinduro. Uye, ini ndakakwanisa kupindura uye 'kunyatso tanga' mubvunzo wangu kuti ndinyatso kuwana mhinduro kwayo. With Twitter, Ndinogona kunatsiridza kutsvaga kwangu, kuwana maonero, uye mazano nekukurumidza sezvandinogona kubaya pane mashoma mhedzisiro mu Google.
Kana iwe uine hanya nekutevera zvakawandisa paTwitter, pamwe iwe unogona kufunga nezvazvo nemaonero akasiyana. Twitter ndiyo yangu Nyowani yekutsvaga Injini.
Tags: Tsvaga KutengesaTwittertwitter kutsvaga
Vhidhiyo: Kunzwisisa Twitter
Kushambadzira Kushandisa kuri Kuchinjira kuKutsvaga
Kwete kurira kunge hongu-murume, asi ndinobvumirana neshoko rega rega. Twitter yanga iri yakanaka yekubatsira kuwana ruzivo. Vanhu ikoko vanotyisa chose.
Doug, mushure mekuverenga tsamba yako, ini ndangoenda kunonyoresa. Nekudaro, mumwe munhu akashandisa zita rangu rekushandisa, saka ndinofanira kuchichinja. Dambudziko chete nderekuti, ini handisati ndaziva nzira yekuita muteveri kana kutevedzera mumwe munhu. Zita rangu rekushandisa ndere dratanone. Iwe unogona ndokumbirawo undiwedzere iwe kumuteveri wako runyorwa? Ndatenda, Doug.
Ndakatarisa uye ndiri kukutevera saka zvinoita kunge wakazvifunga!
Mufaro & kukuona pa Twitter!
Yakakura posvo Doug neni tinobvumirana - inogona kuve chaicho sosi! Ini ndinokuwedzera izvozvi!
Iwe ikozvino unogona kushandisa ChaCha kuburikidza neTwitter. Enda ku http://www.twitter.com/ChaCha uye tevera twitter. Zvino kana iwe ukaita yakananga meseji (d ChaCha) nemubvunzo, iwe unozodzosera yakananga meseji nemhinduro yako. Ivo vane wired mune yavo 242242 zvinyorwa mhinduro sevhisi muTwitter.
Ini ndiri chaizvo nenzira imwe chete… Pamwe Kutsvaga Kwemagariro zvakare. Twitter ichatsiva SEO… Izvo zvingave my kuyedza - edza kutsvaga yangu blog 😛
Nhasi chete ndipo pandatanga kushandisa Twitter. Kunonoka padiki pane bandwagon, asi ini ndinogona kunyatsoona kuti nei vamwe vachiiwana ichibatsira.
Ndinovimba wakapora, Doug.
Douglas- Ini ndiri fan hombe ye twitter zvakare. Izvo zvinoita kuti iwe ugone kutaurirana mune zvidiki zvidiki izvo zviri musimboti wezvauri kufunga kana kugovana. Uyezve Twitter izere ne savvy vekutanga-vanogamuchira uye vanofarira vewebhu. Ini ndakanga ndisati ndanzwa nezve auto-tevera, asi chinhu chinotonhorera chaizvo! Ndatenda nekugovana iyoyo.